न्यूज सञ्जाल: » पर्याप्त पानी पिउनुहोस्, समयमै शौचालय जानुहोस्
पर्याप्त पानी पिउनुहोस्, समयमै शौचालय जानुहोस्
न्यूज सञ्जाल २० भाद्र २०७६, शुक्रबार २०:०१
काठमाण्डौ । सिन्धुलीका नृपध्वज थापा काठमाण्डौको सुन्धारा पुलमुनीको सार्वजनिक शौचालयबाट नाक थुन्दै निस्कनुभयो । शौचालय फोहोर रहेछ र ? भन्ने प्रश्नमा थापाले भन्नुभयो, ‘फोहोर त नाकै भाँचिने खालको, तर पिसाब गर्न पाउँदा जिउ चाहिँ हलुका भयो । दुई घण्टा, पिसाब लागेको दुई घण्टापछि फ्याँक्न पाउँदा आनन्द आयो ।’
लामो समय दिसापिसाब च्याप्दा र पानी नपिउँदा पिसाब फेर्ने चिन्ता केही कम भए पनि यसले स्वास्थ्यमा भने गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको हुन्छ । मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘पिसाब थैली भरिएपछि पिसाब फेरिहाल्नु पर्छ, रोकेर राख्न हुँदैन । रोक्यो भने समस्या शुरु हुन्छ ।’
पटक-पटक पिसाब रोक्ने गरियो भने त शरीरले कति बेला शौचालय जानुपर्छ भनेर थाहा पाउने क्षमता समेत गुमाउन सक्छ । हामीले जति लामो समय पिसाब रोक्छौं, हाम्रो पिसाब थैलीमा त्यति नै धेरै रोगका जिवाणुहरु उत्पादन हुन थाल्छन् । अनि संक्रमण शुरु हुन्छ । रोग लगाउने जिवाणु फैलँदै मृगौलासम्म सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने हुँदा पिसाब रोक्दा शरीरमा ठूलो समस्या हुन सक्ने डाक्टर काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
शहरमा बाहिर निस्कँदा वा गाडीमा लामो यात्रा गर्दा पिसाबको पीरले पानी कम पिउने गरेको धेरैले बताउँछन् । मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा। ऋषिकुमार काफ्ले पानी कम पिउँदा शरीरमा अरु समस्या आउने बताउनुहुन्छ ।
यदि तिर्खा लागिहाल्यो भने तिर्खा मेट्नुपर्छ । तिर्खा लाग्नासाथ एकैपटक धेरै पानी पिउनु पनि हुँदैन । धेरै पानी एकैचोटी पिएमा वान्ता पनि हुन सक्छ । पानी पटकरपटक पिउनुपर्छ ।
तर पिसाबकै पीरले आवश्यकता अनुसार पानी नपिउने धेरै छन् । सुन्दा सानो, तर सहन साह्रो र स्वास्थ्यलाई समेत गाह्रो हुने यो गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जाला ? उज्यालो अनलाइनबाट